Xildhibaan & askari qabay dhaawac culus oo loo qaaday Turkiga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo askari ilaalo ka ahaa baarlamaanka oo dhaawacyo culus kazoo gaareen weerarkii Alshabaab sabitidii ku qaadeen xarrunta Golaha Shacabka ayaa manta loo qaaday dalka Turkiga.
Xildhibaan Faarax Cawad Jaamac iyo askari ka mid ahaa ilaalada xarunta baarlamaanka Soomaaliya oo xaaladooda caafimaadna dalka wax looga qaban waayay ayaa loo qaaday Turkiga si halkaas logu soo daweeyo.
Gudoomiye ku xigeenka 2-aad ee baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabadalla Cawad ayaa sheegay in xildhibaanada iyo askartu isku mid yihiin, islamarkaana dadka xaaladoodu liidato isku mid loogu dadaalayo.
“Xildhibaannada iyo askarta ilaalaya baarlamaanka wa isku mid, sidaa awgeed ayaa maanta dalka Turkiga loo qaaday xildhibaan Faarax Cawad iyo askari ka mid ah ilaalada baarlamaanka, kuwa kalena ee xaaladdoodu daran tahayna waa la qaadi doonaa,” ayuu yiri Mahad Cabadalla Cawad.
Dhawaan ayaa Alshabaab weerar laxaad leh ku qaadeen xarrunta golaha shacabka, xilligaas baarlamaanku shir ku lahaa halkaas, waxaana ku dhintay dad badan halka tiro kale oo 3 yihiin xildhibaano ku dhaawacmeen.